Levitikosy 25: 8-23
Levitikosy 24 Levitikosy 25 Levitikosy 26
Ary manisà sabatan-taona fito ho anao, dia fito taona impito, ka ny hanisanao ny andron'ireo sabatan-taona fito ireo dia sivy amby efa-polo taona.
Dia mitsofa anjomaro avo feo amin'ny andro fahafolo amin'ny volana fahafito; dia amin'ny andro fanavotana no hitsofanareo anjomara eran'ny taninareo.
Ary hamasino ny taona fahadimampolo, ka miantsoa fanafahana amin'ny tany ho an'ny mponina rehetra ao aminy; Jobily ho anareo izany, ka samia mody any amin'ny taninareo avy hianareo sy any amin'ny mpianakavinareo avy.
Jobily ho anareo izany taona fahadimam-polo izany; aza mamafy hianareo, ary aza mijinja izay maniry ho azy avy tamin'ny voa nihintsana tamin'ny fararano lasa, ary aza mioty ny avy tamin'izay tsy namboarinareo;
fa Jobily izany ka ho masina ho anareo. Izay vokatra alaina any an-tsaha no hohaninareo.
Amin'izany taona Jobily izany dia samy hody amin'ny taninareo avy hianareo.
Ary raha mivarotra na mividy zavatra amin'ny namanao hianao, aza misy manao sarotra:
araka ny isan'ny taona aorian'ny Jobily no hividiananao amin'ny namanao; ary araka ny isan'ny fararano no hivarotany aminao.
Araka ny hamaron'ny taona no hampitomboanao ny vidiny, ary araka ny havitsin'ny taona sisa no hampihenanao ny vidiny; fa araka ny isan'ny fararano no hlvarotany aminao.
Ary aza misy manao sarotra hianareo, fa matahora an'Andriamanitiao; fa Izaho no Jehovah Andriamanitrareo.
Ary araho ny didiko, ary tandremo ny fitsipiko, ka araho izy; dia handry fahizay amin'ny tany hianareo.
Ary ny tany hahavoka-javatra dia hihinana hlanareo ka ho voky, ary handry fahizay.
Ary andrao hianareo manao hoe: Inona no hohaninay amin'ny taona fahafito? fa, indro, tsy mamafy izahay, na manangona ny vokatray;
dia hataoko aminareo ny fitahiako amin'ny taona fahenina, ka hisy vokatra ampy ho anareo amin'ny telo taona.
Ary hamafy amin'ny taona fahavalo hianareo ka hihinana ny tranainy mandra-pahatongan'ny taona fahasivy; mandra-pahatongan'ny vao no hihinananareo ny tranainy.
Ary ny tany tsy hatao varo-maty, satria Ahy ny tany; fa vahiny sy mpivahiny amiko hianareo.